Qunsulka Soomaaliyeed ee magaalada Cadan oo ka digay in argagixisada Yemen ay dalkeena soo galaan – Radio Muqdisho
Qunsulka Soomaaliyeed ee magaalada Cadan oo ka digay in argagixisada Yemen ay dalkeena soo galaan
Qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Cadan ee dalka Yemen Axmed Suudaani, ayaa hay’adaha ammaanka ugu baaqay inay isha ku hayaan dhaqdhaqaada xeebaha Soomaaliya, isagoo ka digaya in kooxaha dagaallada ka waddankaasi ee xagjirka ah ay dalkeena soo galaan.
Wareysi uu siiyay Radio Muqdisho ayuu ku sheegay in ay kooxahaan u fudud tahay in ay badda soo maraan si ay u soo galaan Soomaaliya, maaddaama aysan dowladda Yemen si wanaagsan u shaqeyneynin.
“Maadaama ay dowladdii meesha ka maqan tahay, kooxahani waxay soo aadi karaan dalkeena, ayagoo waliba hubeysan ama wata dad badan si ay dagaallo uga huriyaan waddankeena, waxyaabaha wax lagu qarxiyo ayay sidoo kale soo heli karaan, marka hay’adaha amaanku waa inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa xeebaha” ayuu yiri Axmed Suudaani.
Dhinaca kale wuxuu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaallada Yemen in aysan dib ugu laaban Yemen oo ay wali dagaallo ka socdaan.
Wasiirka arrimaha dibadda oo la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee London ku nool
Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo deeq gaarsiisay qoysas ku nool xerada Xagardheer